Wai Yan Lin » Myanmar
After The Cyclone Nargis 2
Update-5 US flight canceled – US ambassador to Thailand said that the US aid flight to Burma is not going ahead. read more Update-4 Burmese government has agreed to accept the US emergency aid assistance. The government allowed at least one US military plane to deliver supplies to Yangon. read…
continue reading 7.05.2008 |0Comment
Myanmar, nargis cyclone
Google Shows Their Concern For Burma
Google adds the link to support the victims of the cyclone Nargis in Burma. You can donate to UNICEF or Direct Relief International from Google site.
After The Cyclone Nargis
After the Cyclone Nargis, the death toll in Burma(Myanmar) reached 50,000(unbelievable! Officially 22,000) and 30,000 people are missing. Many villages were wiped out and several hundred thounsands of people were homeless. The government was hesitate to accept the International assistance. A photo from NASA shows the situation before and after…
continue reading 6.05.2008 |0Comment
ကျွန်တော် ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ အတန်းထဲကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် (Singaporean) က တစ်ရက်မှာမေးလာပါတယ်။“မင်းဒီနေ့ညနေအားလား။”“အားတော့အားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဟ”“ငါအလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာနားမှာ အစားအသောက်ကောင်းကောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်။ မင်းကိုလိုက်စားစေချင်လို့။ မရောက်ဖူးဘူးမဟုတ်လား။”“အင်း။ မရောက်ဖူးဘူး။”“ဒါဆိုရင် ညနေလာခဲ့။ ဘူတာမှာ ငါလာစောင့်ပေးမယ်။”သူလည်း အတင်းခေါ်နေတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်းလာမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီညနေရောက်တော့ သူကကျွန်တော့်ကို ရထားဘူတာမှာ လာစောင့်ပေးတယ်ဗျ။ ပြီးတော့အဲဒီနားမှာပဲ ညစာထိုင်စားကြတယ်။ စားရင်းနဲ့စကားတွေပြောကြတာပေါ့။ ပြောရင်းနဲ့ သူကသူ့အလုပ်မှာ ဟောပြောပွဲရှိတယ်တဲ့။ လိုက်နားထောင်ကြည့်မလားတဲ့။ စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဟောပြောပွဲတစ်ခုလို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ ဘာများလဲဆိုပြီးလိုက်သွားလိုက်တယ်လေ။ ဟိုရောက်တော့ သူတို့အလုပ်က တော်တော်ကို သားသားနားနားကိုလုပ်ထားကြတာ။ အကုန်လုံးက အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ သားသားနားနားတွေဝတ်ထားကြတယ်။ ဟောပြောပွဲစပြီဆိုပြီးသွားထိုင်တော့ ပြောတဲ့လူက တရုတ်လိုပဲပြောမှာတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲအပြင်ထွက်လာတော့ သူငယ်ချင်းက သူ့ဆရာတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ နောက်ပြီးသူတို့စီးပွားရေးအကြောင်း ရှင်းပြမယ်ဆိုပြီး စားပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်ခိုင်းတယ်။ အဲဒီတော့မှ…
continue reading 27.04.2007 |3Comments
continue reading 8.04.2007 |0Comment
Tutorial: How to createasimple drop-down menu jQuery plugin
Tutorial: Easiest way to display random image using PHP
Free Premium WordPress Theme: Featured
Free WordPress Theme: CodeF
Noble: I want to sincerely sayabig thanx to the one who dropped...
Noble: thanxalot for this patch info. i ve been havin DW problems...
Sarah: AHA!!! no wonder! ughh, stupid acer thing.. I was starting...
carlnunes: if($activeText.next().length == 3) // changed0to three
carlnunes: How do you make it stop?
© Wai Yan Lin. All Rights Reserved.